Faahfaahino kasoo baxaya qaraxii xoogaana e ka dhacay ex-control afgooye | STN Somali
Home Wararka Faahfaahino kasoo baxaya qaraxii xoogaana e ka dhacay ex-control afgooye
Qaraxa oo loo adeegsaday gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxaa ku dhintay tiro aad ubadan,inkastoo wali aan la shaacinin tirada rasmiga ah.
Dadka dhintay ayaa waxaa ka mid arday iyo dad shacab ah. Dhinaca kale labo Injineer oo Turki ah iyo seddex askari oo ilaalo u aheyd, kuwaas oo la socday gaari nooca aan xabada karin oo marayey halkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in bartilmaameedka weerarka uu ahaa iyagu, waxaana sidoo kale meesha ka agdhow xarun canshuuraha looga qaado gaadiidka isaga kala goosha waddada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Previous articleBankiga Dhexe ee Somaliya oo Amar ka soo saaray ganacsiga Forex Trade
Next articleDiyaaradaha Mareykanka oo duqeynaya Shabaab